Ndị Uweojii Anwụchiela Pastọ Kwasoro Nwata Nwaanyị Iko N'Anambra | Igbo Radio
Ndị Uweojii Anwụchiela Pastọ Kwasoro Nwata Nwaanyị Iko N'Anambra
Ọ na-adị mma onye rụkata ala, ala arụba ya, maka na ọ na-abụ ikuku kuo, a hụ ike ọkụkọ.
Ndị uweojii steeti Anambra nọrọ na nsonso a wee nwụchie otu nwoke kpọrọ onwe ya pastọ, onye nsọ, onye amụma na onye ọrụ ụka, maka ịkwasò ótù nwata nwaanyị iko n'ike.
Ya bụ nwoke, bụ Maazị Chukwudi Chukwumezie ka e kwuru na ọ gbara ahọ iri atọ na anọ, ma bụrụkwa onyeisi ụka 'Mountain Zion Deliverance Ministry' dị n'Ụgamuma, Obosi, n'okpuru ọchịchị ime obodo 'Idemili North' nke steeti Anambra.
Dịka akụkọ siri kọọ, nwoke ahụ nọbụrụ n'abalị iri abụọ na atọ nke ọnwa iteghete ahọ gara aga, wee rafùó otu nwata nwaanyị gbara ahọ iri na ise, sị na ọ chọrọ ịchụpụ ya ajọ mmụọ n'isi; o wee duru ya gaa n'otu ụlọ nkwariakụ dị na mpaghara 'Eze Iweka Road' dị n'Obosi, wee nọrọ ebe ahụ rie ya ọkọmbọ n'íké.
Ndị ọrụ uweojii mechaara nwụchie nwoke ahụ; ma e mechaara kpụpụ ya ụlọikpe, oge a gachaara ụlọọgwụ wee chọpụta na o riri nwata nwanyị ahụ ọkọmbọ n'eziokwu.
Kaosiladị, n'iji gosi na ọ bụ nke e mere jụọ oyi, nwoke ahụ nọkwàra na nsonso a wee mekwa otu ihe ahụ ọzọ, ma sikwa n'otu ụzọ ịchụpụ ajọ mmụọ ahụ, wee rie nwata nwaanyị ọzọ ọkọmbọ ebe ọ gara ịchụpụ ya ajọ mmụọ n'isi; aka ndị uweojii wee kpàrá ya. Ya bụ nwata nwaanyị bụ onye gbara naanị ahọ iri na ise ma bụrụkwa onye obodo sitere Egbema Ọzụbụlụ dị n'okpuru ọchịchị Ekwusigo.
A kpọrọkwara ya wee gaa ụlọ ahụike ebe a nọrọ wee lelee ya ahụ, ma chọpụta n'ezie na nwoke ahụ pịara ya ọkụ.
Onyeisi ndị uweojii na steeti ahụ bụ CP John Abang enyela ntụziaka ka e nyefee okwu ahụ n'aka ngalaba 'Criminal Investigation Department' nke steeti ahụ maka ome nnyocha miri èmì, nke mgbe e mechaara ya, a kpụpụ ya bụ mkpi na-agbàrá ọha ewu ụlọikpe, ebe a ga-eji usoro iwu wee kee ụdọ ya eriri.